Taranja haiady :: Horaisintsika ny fifaninanana tolona ho an’ny ranomasimbe Indiana • AoRaha
Taranja haiady Horaisintsika ny fifaninanana tolona ho an’ny ranomasimbe Indiana
Manantena ny fitazonana an’ireo tetiandro voafaritra amin’ity efa-bolana farany amin’ny taona 2020 ity ny Federasiona malagasin’ny taranja tolona (FML). Tafiditra ao anatin’izany ny fampiantranoan’i Madagasikara ny fifaninanan’ny ranomasimbe Indiana (Tournoi de l’océan Indien), amin’ny 10 hatramin’ny 15 oktobra 2020, izay hiarahana amin’ny vondron’ny federasiona frankôfôna.
Manana eritreritra hanatontosa fifaninanam-pirenena (Open national) ho an’ny ankizy mpianatra sy sokajy zandriny koa ry zareo, amin’ny volana novambra ho avy izao.
« Miankina amin’ny fivoaran’ny toe-draharaha arapahasalamana ihany anefa no hahafahana manatontosa an’ireo. Tsy maintsy hiatrika fifaninanana, indrindra eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena amin’ny taona 2021 anefa ny atleta, na ho ela na ho haingana. Isaorana ny Fanjakana manokatra tsikelikely amin’ny fahafahana manao fanazarantena », hoy Raveloson Mamitiana, filohan’ny FML.
Tsy hisy kosa ny taona fotsy ho an’ny taranja tolona satria efa vita, tamin’ny volana janoary, ny fifaninanampirenena .
Miandry an’ireo mpikatroka Tolona ny fifanintsanana hikatsahana ny tapakila ho an’ny Lalao olimpika 2021, hatao any Tokyo (Japana). Mety tsy hisy fiovana ireo mpikatroka mandrafitra ny ekipam-pirenena hisehatra amin’io hetsika lehibe io. « Harahina akaiky kosa ny fivoaran’ny toe-batana sy ny fanomanana ara-teknikan’ireo mpikatroka, satria isan’ny handefa solontena amin’ny Lalao afrikana ny Malagasy », araka ny fanampimpanazavan’ny filohan’ny federasiona.
Baolina kitra – Lalaon’ny CAF Horesahina faramparany ny Fosa Juniors sy ny Cnaps Sport
Kitra-Fifidianana filohan’ny CAF :: Manao ankamantatra ny filatsahankofidiany i Ahmad